3 mapurojekiti ane RGB Led uye Arduino kumatunhu ese | Mahara emahara
Imwe yemapurojekiti ekutanga anodzidzwa nemushandisi ari munyika yemagetsi anoshanda nemwenje uye kunyanya nemaLED. Iyo yekudzidzira curve yechinhu ichi iri nyore kwazvo uye mune imwe maminetsi isu tinogona kuzadzikisa zvinhu zvikuru senge smart marambi, mwenje masaini kana eongororo zvinhu zvehukuru chirongwa.
Zvisinei, munguva pfupi yapfuura, vashandisi vari kudzidza kushandisa maRGB maLED, musiyano wakave wakakurumbira uye inobatsira zvikuru kumabasa mazhinji. Asi Chii? Ndeapi mapurojekiti akakurumbira atinogona kugadzira neaya matsva eRGB Led diode?
1 Chii chinonzi RGB Led?
2 Asingagumi akatungamira RGB Cube
3 Nyore LED RGB Chiratidzo
4 Akatungamira RGB Pixel Kubata Tafura
5 Ndeipi chirongwa chakakosha kuvaka?
Chii chinonzi RGB Led?
LED ndiyo mwenje unoburitsa diode. Chipa chisingadhuri uye chiri nyore kushandisa chero bhodhi remagetsi kunyangwe pasina icho. Mabasa aro makuru isimba rakaderera raanoshandisa uye nemhando dzakasiyana dzatinowana nema LED. Nekudaro, kusiyana nemabhuru echinyakare anotivhenekera, Ma LED anotibvumidza kuti tivashandise mumidziyo yakasiyana uyezve tinogadzira mamwe maumbirwo ari kure neyakajairwa girobhu racho. Maawa anobatsira eUSS akakwirira zvakanyanya kupfuura mamwe majaira. Nekudaro, sebhuru girobhu, diode rerudzi urwu rinopa akawanda maawa echiedza kupfuura echinyakare girobhu racho. Sechikamu chechiratidziro, mapikiseli e LED anopa hupenyu hwakawanda kupfuura akajairwa pixel; Uye saka nemidziyo yakasiyana inoshandisa tekinoroji.
Asi mune ino kesi ticha taura nezve RGB mwenje, inowedzera inozivikanwa marambi. Chikonzero chebudiriro iyi chakakonzerwa nemikana yavanopa pamusoro pemwenje wakajairwa. Dhodhi re LED rinopa chete ruvara rwechiedza, chimwe chinhu chatisingakwanise kuchinjira kuchinhu kunze kwekunge tachinja diode. RGB Led diode inoburitsa mwenje mumitatu mitatu: Dzvuku (Dzvuku), Girinhi (Girinhi) uye Bhuruu (Bhuruu) nemubatanidzwa wavo, ndiko kuti, inogona kushandura ruvara kune zvatinoda pasina kuchinja diode. Kubudirira kweRGB mwenje mwenje kuri mune mukana wekushandura ruvara rwechiedza usingachinje diode, chimwe chinhu chinoshanda kwazvo icho chinongodiwa chete ruzivo rwechirongwa.
Asingagumi akatungamira RGB Cube
Iyi purojekiti inosanganisira kugadzira cube yemavara inogona kuchinja zvinoenderana nenguva yatiinayo kana kungoti mashoma mashoma masekondi. Infinite Led RGB Cube ibhuru cube, iyo inogona kushanda se diode mwenje. Mhedzisiro yekupedzisira ichave musanganiswa weiyo rgb led diode uye Arduino.
Nekuvakwa kwayo iwe unoda 512 RGB Led diode, makristasi matanhatu, microcontroller inogona kunge iri Arduino UNO, tambo kana bhatiri kusimbisa ma diode uye chigadziko chinotsigira chimiro chose. Kana tangova neizvi, tinofanirwa kubatanidza ma diode ese kuitira kuti vagadzire cube kana kuve necube shape. Chakavanzika chekuvaka chimiro ichi kukotama pini imwe yedhiode yakatarisa kune diode, ichigadzira kona yekurudyi neimwe pini. Kuchave nerutivi rumwe rweiyo cube iyo isina kana hukama kune imwe, asi ese achave akabatanidzwa kune imwe RGB yakatungamirwa diode.
Kana tangove nezvose zvakagadzirwa, isu tinofanirwa kujoina mapini anosara kune microcontroller board. Panguva ino, isu tinofanirwa kuratidza kuti divi reiyi cube inofanirwa kuve ne8 x 8 diode, ichigadzira cube ye8 x 8 x 8 RGB maLED. Nekudaro, isu tinobatana nembambo dzedhodhi dzakasununguka kubva ku cube kuenda kubhodhi uye tinosimudza chirongwa kwachiri chinobatidza diode cube zvishoma nezvishoma uye nemavara akasiyana siyana. Kana zvese zvangounganidzwa, isu tinofanirwa kushandisa makristasi kugadzira mhando yeti inodzivirira uye inovhara ma diode, hwaro hunotsigira kwete chete diode cube asiwo iyo urn yatakagadzira. Kuvakwa kweiyi Infinity Led RGB Cube kuri nyore kwazvo asi zviri nyore ndiko kugadzirisa kwayo. Zvakadaro, mu Mirayiridzo Iwe uchawana nhanho-nhanho nongedzo kune kwayo kuvakwa.
Gadzira yako wega MIDI controller neArduino
Nyore LED RGB Chiratidzo
Ichi chirongwa chinozivikanwa zviri nani uye chinonyanya kubatsira asi zvakare chakaoma kuvaka kupfuura chirongwa chakapfuura. Nyore LED RGB Chiratidzo chiratidzo cheruzivo chakavakwa nema diode uye Arduino. Iyi purojekiti inoda ma510 RGB maLED kana isu tinogona kushandura izvi kuita mabhureki erudzi rumwe chete. Iyo pfungwa ndeyekuvaka rectangle ye10 x 51 ma LED. Tichada zvakare 3 acrylic machira ayo anoshanda senge mutsigiri uye mudziviriri weEyore LED RGB Chiratidzo chatinogadzira. 510 RGB maLED, tambo dzekuita iyo wiring, microcontroller board senge Arduino UNO uye bhatiri kusimbisa diode uye zvakare Arduino bhodhi.
Kutanga isu tinofanirwa kugadzira chimiro uye nekuisa ma diode pairi. Tinogona kuita sekuda kwedu asi hunyanzvi hwekushandisa imwe yeaya maacrylic machira senge rutsigiro rwemwenje yeLED, sezvo iri pachena, haizofarirwe mune yekupedzisira mhedzisiro. Netambo yakatetepa tinofanirwa kuwedzera ma diode uye toabatanidza iwo kune microcontroller. Kana zvese zvangoiswa, tinobatanidza microcontroller kubhatiri uye mariri tinosuma chirongwa chatinoda. Chirongwa chichaita rinotevera basa:
Vhura mamwe maLED.
Imwe yeaya ma diode ichave nerumwe ruvara.
Mhedzisiro yacho ichave yekugadzirwa kwetsamba, zviratidzo kana zviratidzo zvatinogona kushandisa mune mamwe mamiriro. Nyore LED RGB Sign chirongwa chinonakidza kwazvo nekuti chinonyanya kubatsira, sezvo inotibvumidza isu kugadzira zviratidzo zvinovhenekerwa zvatinoda. Tine rumwe ruzivo nezve kuvakwa kwayo pa iyo Instructables repository. Asi haisi chirongwa chakavharwa uye Tinogona kusiyanisa huwandu hwema diode kana kushandura zvakananga chirongwa icho chinoita mwenje wemadhiodhi kuti chishande zvakasiyana. Simba rinowedzera kana isu tasanganisa ichi RGB LED chiratidzo uye Arduino, kuve nekugona kugadzira smart smart zviratidzo kana nekubatana nemakomputa kunge ehunyanzvi zviratidzo.
Akatungamira RGB Pixel Kubata Tafura
Led RGB Pixel Kubata Tafura chirongwa chinonakidza chinoshandura diode kuita tafura yemitambo. Chirongwa ichi chakaoma kudarika mapurojekiti apfuura asi kuvakwa kwacho kuri nyore. Mune ino kesi isu tichabatanidza zvinopfuura RGB uye Arduino maLED, sezvo isu tichizoshandisawo ekubata sensors kana IR sensors. Kune izvi isu tichada zvinotevera zvinhu:
Tafura ine yakajeka nzvimbo.
Iyo matrix ye10 x 16 RGB maLED.
Yakarongeka ye10 x 16 IR inobata maseru.
Iyo SD kana MicroSD kadhi rekuchengetedza data.
Mutauri akangwara ane kubatana kweBluetooth.
Mune ino kesi isu tinofanirwa kugadzira node kana "makiyi" ayo anoumba musanganiswa weiyo yekubata sensor uye diode uye ndiwo achave madhiraivhu atichadzvanya patinotamba netafura yedu. Nenzira yekuti node yega yega inogona kuburitsa ruzivo kana tikabata pani uye inogona kuburitsa mwenje. A) Hongu, Tinogona kutamba neiyi tafura tetris, yekuona ndangariro mitambo, iyo yakasarudzika nyoka, ping-pong kana gadzira iri nyore counter. Pakazara tichava nenzvimbo zana nemakumi matanhatu dzatinogona kuisa muchimiro chegumi gumi nematanhatu.
Tichaisa iyi matrix pasi pegirazi petafura. Girazi retafura rinofanira kutsiviwa nechero rakapfava senge acrylic plastiki. Izvi zvinoitirwa kuitira kuti sensor inoshanda patinoisvinira.
Zvino, takaunganidza zvese, isu tinofanirwa kugadzira chirongwa chinoshanda uye chichiita neiyi matrix. Tinogona kushandisa mitambo senge tetris kana kungoti mutambo wekare wa "Simon". Isu tinoiisa mu microcontroller bhodhi uye tinoibatanidza kune iyo matrix. Tinogona wedzera ruzha kune ino projekiti nekuda kwekutaura kweBluetooth kwatinogona kubatanidza kune iyo bluetooth sensor iyo ine microcontroller board.
Ichi ipfupiso yeiyo Led RGB Pixel Kubata Tafura chirongwa asi gwara rayo harisi nyore sezvarinoratidzika. Kugadzirwa kwenzvimbo kunoda zano uye kugadzirwa kwenzvimbo diki, neiyo software yemutambo chinhu chimwe chete chinoitika. Pano isu taingoda kutaura nezve huru pfungwa uye chii chinogona kuguma. Asi iwe une gwara rakazara kune kuvakwa kwayo mu Iyi link.
Ndeipi chirongwa chakakosha kuvaka?
Isu tataura nezve matatu mapurojekiti ane RGB maLED izvo zviri nyore kuvaka uye zvisingadhuri. Kunyangwe vazhinji venyu makaona kuti tinoshandisa akawanda ma diode, isu tinofanirwa kutaura kuti mutengo weizvi nyowani wakadzikira kwazvo, wakaderera zvekuti huwandu hwakawanda hwedhodhi hunongova nemutengo wemaviri emauro. Mese mapurojekiti ane zvaari uye kukwezva kwavo. Ini pachangu Ini ndinokurudzira kuita ese mapurojekiti. Chekutanga aizovaka cube yemwenje; gare gare aizovaka chiratidzo chakavhenekerwa uye pakupedzisira aizovaka tafura yemutambo. Kurongeka kwekupedzisa kwakakosha sezvatinoenda kubva kune yakapusa purojekiti kuenda kune yakaoma chirongwa. Chero zvazvingaitika, mushure mekuvakwa kwemapurojekti matatu aya mhedzisiro yacho ichave yakafanana: isu tichagona kushandiswa kwema diode aya. Uye kwauri Ndeipi chirongwa chaunonyanya kufarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » 3 mapurojekiti ane RGB Led uye Arduino